Man United oo guul weyn ku gaartay garoonkeeda Old Trafford, xilli CR7 uu labo jeer shabaqa soo taabtay… + SAWIRRO – Gool FM
Man United oo guul weyn ku gaartay garoonkeeda Old Trafford, xilli CR7 uu labo jeer shabaqa soo taabtay… + SAWIRRO
Dajiye September 11, 2021
(Manchester) 11 Sebt 2021. Manchester United ayaa guul weyn ku gaartay garoonkeeda Old Trafford, xilli Cristiano Ronaldo uu labo jeer shabaqa soo taabtay, ciyaar ku dhammaatay 4-1, oo qeyb ka aheyd kulammada isbuuca afaraad horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ku hoggaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Manchester United.
Daqiiqadii 45 + 2 kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 1-0 ka dhigay laacibkooda dhawaan galka ah ee Cristiano Ronaldo.
56 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay kooxda Newcastle United ayaa dhalisay goolka bar-bardhaca, waxaana 1-1 ka dhigay Javier Manquillo, kaddib markii ay caawin kaga timid saaxiibkiis Allan Saint-Maximin.
Daqiiqadii 62-aad Cristiano Ronaldo oo caawin ka helay saaxiibkiis Luke Shaw ayaa wuxuu ciyaarta ka dhigay 2-1 ay ku hoggaamineysay kooxda Manchester United.
80 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay Bruno Fernandes oo caawin ka helay saaxiibkiis Paul Pogba ayaa wuxuu dheesha ka dhigay 3-1 ay ku hoggaamineysay kooxda Manchester City.
Daqiiqadii 90+2 daqiiqo Jesse Lingard oo caawin ka helay saaxiibkiis Pogba ayaa wuxuu hoggaanka u dheereeyay kooxda Man United wuxuuna dheesha ka dhigay 4-1.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 4-1 ay kaga adkaatay Manchester United kooxda Newcastle United oo ay ku soo booqatay garoonka Old Trafford, United ayaa haatan ku 10 dhibcood ku hoggaamineysa dhanka kala sareynta horyaalka Premier League
Man City oo saddexda dhibcood ka soo heshay kooxda Leicester City oo ay ku booqatay garoonka King Power
Chelsea oo garoonkeeda Stamford Bridge guul kaga gaartay kooxda Aston Villa… +SAWIRRO